Dugsiga Sare - Dugsiyada Dadweynaha ee Harta Biyaha ee ISD 834
Heer ahaan >
Fursado Waaweyn, Shakhsiyadeed
Dugsiga Sare ee Stillwater waa dugsi sare oo dhameystiran oo ardayda siiya fursado aan caadi aheyn - laga bilaabo muusigga qaran ahaan la aqoonsan yahay iyo koorsooyinka gacanta lagu qaato ee gaarka ah.
Baro Dugsigeenna Sare
Ma dooneysaa inaad wax badan ka barato dhammaan siyaabaha aan uga caawinno ardayda inay riyadooda ka dhabeeyaan?
Raadi La Taliyahaaga
Khariidadda Dugsiga Sare
Ma isweydiisay waxa ilmahaagu ka baranayo dugsiga hadda? Ma jeceshahay sida aad uga caawin karto inaad taageerto iyaga markay qorsheynayaan mustaqbalka? Ama waxaa laga yaabaa inaadan xasuusan karin goorta ay u maleynayaan in iskuulkaas la dhameystiray! Khariidadeena Dugsiga Sare waxaa loogu talagalay inay kaa caawiso inaad ka hesho jawaabaha dhammaan su'aalaha la xiriira dugsigaaga.
Ma heli kartid waxaad raadineysay halkan? Si toos ah ula xiriir dugsiga sare ama booqo khariidadeena Qoyska oo buuxa si aad u hesho macluumaad ku saabsan barashada hore, dugsiga hoose, dugsiga dhexe, dugsiga sare iyo wixii ka dambeeya
Fasalka 9aad: Qorshaynta Mustaqbalka
Baro waxa ay tahay inaad sameyso fasalka sagaalaad si aad uga caawiso u diyaar garowga nolosha dugsiga sare kadib.
Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri Fasalka 9aad: Qorshaynta Mustaqbalka
Maamuusta Aqoonsiga & Aqoonsiga
Waxbadan ka baro siyaabaha badan ee aan ugu aqoonsano ardayda guulaha waxbarashadooda.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Maamuusta Aqoonsiga & Aqoonsiga
Taageerada waxbarasho ee ardayda
Fiiri ilahaan iyo tilmaamahan si ay kaaga caawiyaan inaad ku guuleysato dugsiga sare.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan taageerada tacliinta ee ardayda
Imtixaanka Meelaynta Sare (AP)
Macluumaadka ku saabsan diiwaangelinta AP, imtixaannada iyo taariikhaha muhiimka ah.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Imtixaanka Meelaynta Sare (AP)
Baro wax badan oo ku saabsan sida aan u hubinayno in ardayna aysan ku dhicin burburka dugsiga sare.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan BARR
Soo Celinta Amaahda
Baro wax badan oo ku saabsan sida ardaydu dib ugu soo ceshan karaan buundooyinka dhicisoobay oo aad fursad labaad ugu hesho qalinjabinta
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Soo-celinta Amaahda
Fasalka 10aad: Qorshaynta Mustaqbalka
Baro waxa ay tahay inaad ku sameyso fasalka tobnaad si aad uga caawiso u diyaar garowga nolosha dugsiga sare kadib.
Akhri Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan Fasalka 10aad: Qorshaynta mustaqbalka
Fasalka 11aad: Qorshaynta Mustaqbalka
Baro waxa ay tahay inaad sameyso fasalka 11aad si aad uga caawiso u diyaar garowga nolosha dugsiga sare kadib.
Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri Fasalka 11aad: Qorshaynta Mustaqbalka
Imtixaanada Ogolaanshaha Kulliyadaha
ACT waa imtixaan gelitaan jaamacadeed oo la bixiyo shan jeer sanadka oo dhan. ACT waxaa la siiyaa ardayda dhigata iskuulka inta lagu jiro bisha Abriil ee sanad-dugsiyeedkooda yar (ardaydu waa inay iska bixiyaan lacagta imtixaanka).
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Imtixaannada Ogolaanshaha Kulliyadda
Nidaamka Codsiga Kuleejka
Xiriirinta iyo macluumaadka kaa caawinaya howsha arjiga.
Akhriso inbadan oo kusaabsan Nidaamka Codsiga Kuleejka
Fasalka 12aad: Qorshaynta Mustaqbalka
Baro waxa ay tahay inaad sameyso inta lagu jiro sanad-dugsiyeedkaaga sare si aad gacan uga geysato udiyaar garowga nolosha dugsiga sare kadib.
Faahfaahin dheeraad ah ka akhriso Fasalka 12aad: Qorshaynta Mustaqbalka
Codso deeqaha waxbarasho ee bulshada
Wax ka baro deeqaha waxbarasho ee bulshada ee ay heli karaan ardayda dhigata dugsiga SAHS.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Dalbashada deeqaha waxbarasho ee bulshada
“Waxba uma baranno iskuulka ee waxaan u baranaynaa nolosha” waxay ka badan tahay hal ku dhigga dugsigeenna. Hadafkeennu waa inaan kaa caawinno inaan kuu diyaarinno nolol macno leh oo raaxo leh oo dhaafsiisan Dugsiga Sare ee High Area Area - meel kasta oo ay waddadaadu kuu hoggaamiso!
Kaalinta Koowaad Ardayda
Xitaa kahor maalinta ugu horeysa ee iskuulka, waxaan sameynaa wax walba oo aan kari karno si aan u taageerno ardaydeena.
Barnaamijka hanuuninta Fasalka 9aad ee Link Crew
Dhisida Hantida, Yaraynta Khatarta (BARR) taageerada tacliinta iyo bulshada / shucuurta
Waxaan siinaa ardayda Flex Time inta lagu jiro usbuuca si ay ugu adeegsadaan habka ugu habboon baahidooda. Qaarkood waxaa loo isticmaali karaa waxqabadyo ama umeerin. Kuwa kale waxay u isticmaali karaan waqtiga qabashada shaqada koorsada ama iskaashiga mashruuc kooxeed
Waddooyinka & Fursadaha waxay ka caawisaa dhammaan ardayda inay si fiican u fahmaan xulashooyinka xirfaddooda. Waxaan siineynaa khibrad-gacmeed dhinacyo kala duwan ah si ay uga baxaan dugsiga sare iyagoo diyaar u ah shaqo, barnaamij farsamo, shahaadada wadajirka ah, shahaado, shahaado jaamacadeed afar sano ah ama militariga ah.
Ma xiiseyneysaa ka caawinta ardayda inay sahamiyaan waddooyinka shaqada?
Mashruuca Xirfadeed ee Dugsiga Sare ee Stillwater Area waa barxad lagu horumariyo shaqaalaha mustaqbalka. Waxay ardayda u siisaa dariiqooyin ay ku baadhaan cidda ay yihiin iyo waxa ay xirfad ku doonayaan. Sidoo kale waa dariiq loo maro loo shaqeeyeyaasha wajahaya foosha iyo xirfadaha oo ay ku siiyaan khibrad iyo waxqabadyo waxbarasho khibrad jiilka dambe ee shaqaalaha.
Ma xiisaynaysaa inaad nolosha wax ka beddesho? Waxaan raadineynaa inaan dhisno xitaa iskaashi dheeri ah oo udhaxeeya ardaydayada iyo ganacsiyada maxalliga ah. Ku dar qiime ururkaaga iyo caruurteena!
Adoo ku xiraya dadka qaangaarka ah khibrad iyo xikmad si ay ula wadaagaan la taliyayaasha - dhamaanteen waxaan bilaabi karnaa inaan xirno farqiga xirfadaha si baaxad leh oo aan si fiican ugu diyaarino dhalinyarada shaqooyinka qarniga 21aad
- Patty Alper,
Qoraaga Shaqada Barid
Anigoo ah macallin xisaabiye hore ee dugsiga sare, waxaan fahansanahay baahida loo qabo ardayda inay u arkaan muhiimadda shaqadooda. Xirfadaha adeegga macaamiisha iyo la shaqeynta “live ammo” waa mid aad u qiimo badan oo ay adag tahay in lagu soo celiyo fasalka dhexdiisa. ”
Shirkadda Ka Baxsadka Biyaha